hypocretin နှင့် LC-NE အာရုံခံများ၏လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဝါယာကြိုးများ: နှိုးဆွမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
hypocretin နှင့် LC-NE အာရုံခံ၏ functional ဝါယာကြိုး: arousal များအတွက်သက်ရောက်မှု (2013)
တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2013 မေလ 20; 7: 43။ Doi: 10.3389 / fnbeh.2013.00043 ။ eCollection 2013 ။
Carter က ME1, က de Lecea L ကို, Adamantidis တစ်ဦးက.
တစ်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်ရန်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သူတို့ရဲ့ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ပြည်တွင်းရေးဇီဝကမ္မပြည်နယ်ခံစားခြင်းနှင့်စနစ်တကျ arousal ၏အဆင့်ဆင့်ထိန်းညှိရပေမည်။ သညျ့မွငျ့မားဖြစ်ကြောင်း arousal ၏အဆင့်ဆင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအဓိကရန်ပြည်တွင်းရေးစွမ်းအင်စတိုးဆိုင်၏မတတ်နိုင်သောအသုံးပြုခြင်းနှင့် unfocused အာရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနိမ့်ဖြစ်ကြောင်း arousal ၏အဆင့်ဆင့်စနစ်တကျအစားအစာ, ရေ, လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်အသက်အဘို့လိုအပ်သောသည်အခြားအကြောင်းရင်းများကိုရှာခြင်းငှါ၎င်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဦးနှောက်အတွက်, hypocretin neuropeptides ဖော်ပြကြောင်းအာရုံခံထူးခြားအပြုအမူလိုအပ်ချက်နှင့်အညီတိရစ္ဆာန်နှင့်ညှိ arousal ပြည်နယ်များ၏ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းပြည်နယ်ခံစားဖို့ စုပေါင်း. နိုင်ပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အဆိုပါအာရုံခံခြင်းနှင့် arousal ထိန်းညှိမှာသူတို့ရဲ့မြစ်အောက်ပိုင်းဆက်သွယ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာဖို့ယာယီတိကျသော optogenetic နည်းစနစ်လျှောက်ထားကြပါပြီ။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ brainstem locus coeruleus (LC) တွင် noradrenergic အာရုံခံ arousal အပေါ် hypocretin အာရုံခံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေဘို့အထူးအရေးကြီးလှသည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးမီရလဒ်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းမနိုး၏အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များကိုဖြတ်ပြီးတစ်ခုသက်ရှိများ၏ arousal ပြည်နယ်ထိန်းညှိတွင်ဤအာရုံခံ၏ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု၏ဂယက်ရိုက်စဉ်းစားပါ။
keywords: hypocretin, orexin, hypothalamus, အာရုံကြောဆားကစ်, optogenetics, arousal စနစ်, အိပ်စက်ခြင်း, norepinephrine
အိပ်စက်ခြင်းမနိုးတိရစ္ဆာန်နိုငျငံတျောသညျတလျှောက်လုံး ultradian နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ကာလနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူကြောင့်သံသရာနှစ်ခုအပြန်အလှန်သီးသန့်ပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ နိုးတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ရိပ်မိနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်သည့်အတွက်သတိပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုးနိုးကွားကွား၏အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလပြီးနောက်အိပ်ပျော်ခြင်းဖိအားတိုးခြင်းနှင့်ကျပုံစံကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်အဆင့်မြင့်အာရုံခံတံခါးခုံနှင့်အတူဆွေမျိုးလှုပ်ရှားမှု၏ကာလအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းအိပ်ပျော်ခြင်းစတင်ခြင်းစေပါတယ်။
နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်, အိပ်ပျော်ခြင်းယေဘုယျအားဖြင့် (လူသားတွေအတွက် SWS, ဒါမှမဟုတ် NREM အိပ်ပျော်ခြင်း) နှေးကွေးနေ-လှိုင်းအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ခွဲခြားနှင့်လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှု (စ "ဝိရောဓိအိပ်ပျော်ခြင်း" ဟုခေါ်) (REM) အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုး, SWS နှင့် REM sleep ကိုတိကျသော electroencephalograph (EEG) နှင့် electromyographic (တွေ့ရစဉ်) အင်္ဂါရပ်တွေအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကွဲပြားအပြုအမူပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ နိုးထစဉ်အတွင်းနိမ့်လွှဲခွင်, ရောထွေး-အကြိမ်ရေလှိုကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။ SWS သူ၏ကြီးစိုးခြင်း (EEG ပါဝါသိပ်သည်းဆအားဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) အိပ်စက်ခြင်း၏အတိမ်အနက်ကိုထင်ဟပ် High-လွှဲခွင်နှေးကွေးလှို (0.5-4 Hz) ကသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ REM sleep ကိုပိုမိုမြန်ဆန်, ရောထွေးကြိမ်နှုန်းလှိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအနည်းကိန်းအပြုအမူပြည်နယ်, အရာ theta အကြား (5-10 Hz) လှိုကြွက်သား atonia ဖြင့်လိုက်ပါသွား, ကြွက်များတွင်လွှမ်းမိုးအဖြစ်နှလုံးနဲ့အသက်ရှူနှုန်းပွောငျးခွငျးဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းမနိုး၏ပြည်နယ်များသှေးနှင့် quantitative သွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်လွယ်ကူသော်လည်းကဆိုလိုသောအရာကိုသတ်မှတ်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ခဲသည် "arousal ။ " ဒီအသုံးအနှုန်း arousal များသောအားဖြင့်တုန့်ပြန်, တိုးမြှင့်မော်တာကို Activation အဖြစ်တငျပွ, နိုးနိုးကွားကွားစဉ်အတွင်းသတိဝီရိယနှင့်ရွှင်လန်း၏ဒီဂရီကိုရည်ညွှန်းသည် အာရုံခံသွင်းအားစု, စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုနှင့်တိုးမြှင်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်။
ထိုအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့် arousal ၏ယေဘုယျအဆင့်အထိအခြေခံဦးနှောက်ယန္တရားများမသိရသေးရှိနေဆဲနှင့်များစွာသောဂန္ထဝင်လေ့လာမှုများအဘယ်သူ၏လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားအပြုအမူပြည်နယ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်အာရုံခံအတော်ကြာလူဦးရေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာမူလကအမူအကျင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုမတိုင်မီတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံ (ဆိုလိုသည်မှာတက်ကြွအာရုံခံတဲ့အိပ်စက်ခြင်း-to-ပါတီအားအကူးအပြောင်းရှေ့) ထိုယူဆခဲ့သည် မြှင့်တင်ရန် လာမယ့်ပြည်နယ်, တိကျတဲ့ပြည်နယ် (နိုးနိုးကွားကွားသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်ခြင်း) စဉ်အတွင်းတက်ကြွဖြစ်ကြောင်းအာရုံခံရန်အရေးကြီးပါသည်နေစဉ် ထိန်းသိမ်းရန် က။ ဒီအမြင်ကွန်ယက်အတွက်အာရုံခံပြည်နယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခြင်းမရှိပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားအပိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အာရုံခံမှဆက်သွယ်မှု၏နိုင်ငံပိုင်နယ်နိမိတ်-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှုပြသအံ့သောငှါဥာဏ်အားဖြင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးအိပ်ပျော်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍနှင့် / သို့မဟုတ် arousal ပြည်နယ်များ play ကြောင့်အာရုံကြောလူဦးရေရှိကွောငျးပေါ်မူတည်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ arousal မြှင့်တင်ရန်ထင်နေကြတယ်လူဦးရေများပါဝင်သည်: (hcrt-လည်း "orexins" ဟုခေါ်) ကို hypocretin - ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus အတွက်ဖော်ပြအာရုံခံခြင်း, brainstem အတွက်အာရုံခံ -expressing အဆိုပါ noradrenergic locus coeruleus (LC), အ serotoninergic dorsal raphe အရေးပါ (DRN) အဆိုပါ posterior hypothalamus အတွက် brainstem ထဲမှာ, histaminergic tuberomammilary နျူကလိယ (TMN), အ cholinergic pedunculopontine (PPT) နှင့် laterodorsal tegmental (LDT) ကို midbrain အတွက်အရေးပါသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် Basal forebrain (ဂျုံးစ်အတွက် cholinergic အာရုံခံ, 2003) ။ Melanin-အာရုံဟော်မုန်း (MCH) ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus ကနေအာရုံခံ, အဖြစ် brainstem ထံမှ glutamatergic နှင့် GABAergic အာရုံခံနေ REM sleep (ဝိန်း Fort et al စဉ်အတွင်းတက်ကြွနေစဉ်မတူဘဲ, anterior hypothalamic အဆောက်အဦထဲကနေ inhibitory အာရုံခံ, SWS စဉ်အတွင်းတက်ကြွနေကြသည်။ , 2009).
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျနော်တို့နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းရန်အမျိုးမျိုးသော mouse ကိုမော်ဒယ်များနှင့်အတူ optogenetic နည်းပညာကို အသုံးပြု. စတင်ပါပြီ ဘယ်လို arousal စနစ်များနိုးနိုးကွားကွားနှင့် arousal ထိန်းညှိကြဘူး? သူတို့ဘယ်လို function တိကျတဲ့အခင်းအကျင်းအတွက် arousal, မြှင့်တင်ရန်ထိန်းသိမ်းရန်သို့မဟုတ်ထပ်တိုးဖို့အပြန်အလှန်ပါဘူး? ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများတှငျကြှနျုပျတို့ hcrt (က de Lecea et al ဖော်ပြကြောင်းအာရုံခံအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါပြီ။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါ hcrt က de Lecea et al (နှစ်ခု neuro-excitatory peptides ဖြစ်ကြသည်။ , 1998; Sakurai et al ။ , 1998) က mouse ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus (~ အသီးသီးကြွက်နှင့်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ 3200 နှင့် 6700-50,000,) (က de Lecea နှင့် Sutcliffe အတွက် ~ 80,000 အာရုံခံထုတ်လုပ် 2005; Modirrousta et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံအဆိုပါ cortex အတွက်ဖြန့်ဝေမျိုးစုံစနစ်များအနေဖြင့် functional သွင်းအားစု, limbic စနစ်, hypothalamus သူ့ဟာသူအပါအဝင် Sub-cortical ဒေသများ, thalamus, နှင့် brainstem cholinergic အရေးပါထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုစီမံချက်များ, အ reticular ဖွဲ့စည်းရေး, အ midbrain raphe အရေးပါလျက်, periaqueductal မီးခိုးရောင်လက်ခံရရှိသည်။ အလှည့်မှာတော့အဲဒီအာရုံခံအာရုံခံ hcrt receptors (OX1R နှင့် OX2R) ဖော်ပြခြင်းငှါ, ဦးနှောက်၏ arousal နှင့်ဆုလာဘ်စင်တာများမှအပါအဝင်ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်, လျှောက်လုံးပရောဂျက်။ အဆိုပါ afferent နှင့် hcrt အာရုံခံ၏ efferent စီမံချက်များသူတို့ကအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအားသံသရာထိန်းညှိခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေအပါအဝင်မျိုးစုံ hypothalamic လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်ကဏ္ဍမှပါကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ noradrenergic LC အာရုံခံမှ hcrt အာရုံခံမှတိကျတဲ့ efferent projection တွေ့ပြီအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပိုမို arousal အထွေထွေရှုထောင့်ဖျန်ဖြေ။
ဤတွင်ကျနော်တို့အယ်လ် Adamantidis et (hcrt နှင့် LC အာရုံခံ arousal ပြည်နယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစေသောအယူအဆစမ်းသပ်ရန်ကြောင်းမကြာသေးမီ optogenetic စမ်းသပ်ချက်အနှစ်ချုပ်။ , 2007; Carter က et al ။ , 2009, 2010, 2012) ။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်ခေတ္တမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အစဉ်အလာမျိုးဗီဇနှင့် pharmacological နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. ဤအမှုစနစ်များနှင့် ပတ်သက်. ယခင်အစီရင်ခံစာများအကဉျြးခြုပျ။ Next ကိုကျနော်တို့ရွေးချယ်လွတ်လပ်စွာ-ရွေ့လျားကြွက်များတွင်ဤစနစ်များကိုလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ optogenetic စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်ပေါင်းစပ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်မေးခွန်းများကိုဆွေးနွေး arousal ဆားကစ်၏အနာဂတ်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခှဲစိတျအပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Hypocretins, နိုးနိုးကွားကွားနှင့် narcolepsy
hcrt အာရုံခံတိတ်ဆိတ်နိုးနိုးကွားကွား, SWS နှင့် REM အိပ်နေစဉ်ယေဘုယျအားဖြင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေပေမယ်တက်ကြွစွာနိုးထနှင့်နေ REM sleep-to-ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှု (Lee က et al စဉ်အတွင်းမြင့်မားသောဥတုနှုန်းထားများပြသ။ , 2005; Mileykovskiy et al ။ , 2005; Takahashi et al ။ , 2008; ဟက်စ et al ။ , 2009) ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် (ဥပမာအနေနဲ့အာရုံနှိုးဆွ) (Takahashi et al သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်း arousal စဉ်အတွင်းမြင့်မားသောဥတုနှုန်းထားများပြသ။ , 2008) နှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူ (Mileykovskiy et al ။ , 2005; Takahashi et al ။ , 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ hcrt အာရုံခံအမျိုးမျိုးသောရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိတိုးမြှင့ရွှင်လန်း၌အိပ်ပျော်-to-နိုးထဖို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုပါဝင်ဆောင်ရွက်အဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
hcrt အချက်ပြ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်မှုအပြုအမူကြွက်တွေမှာပြည်နယ်များ, ကြွက်, ခွေးလူသားများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် zebrafishes (Sakurai ၏သမာဓိများအတွက် hcrt များ၏လိုအပ်ချက်ပြ, 2007; Yokogawa et al ။ , 2007) ။ အမှန်စင်စစ်အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုအရှုံး-of-function ကိုသက်သေအထောက်အထား hcrt ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် narcolepsy (Peyron et al ၏ရောဂါလက္ခဏာများအကြားက link ကနေကြွလာ။ , 2000; Saper et al ။ , 2010) ။ cataplexy နှင့်အတူ Narcoleptic လူနာတစ်ဦးပြည့်စုံမရှိခြင်းတို hcrt မျိုးဗီဇဟာ hypothalamus အတွက်မှတ်တမ်းအဖြစ် cerebrospinal fluid (Thannickal et al အတွက် hcrt ၏မဟုတ်သောသို့မဟုတ်အနိုင်နိုင်-ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဆင့်ဆင့်။ , 2000; Sakurai, 2007; Yokogawa et al ။ , 2007) ။ Doberman narcoleptic ခွေးတစ် mutation ကိုထမ်း OX2Rတစ်ဦးကိုပယ်ဖျက်ဖြစ်စေနှင့်အတူအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မျိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာကြွက် hcrt, OX2R, ဒါမှမဟုတ် hcrt ဆဲလ် cataplexy ဆင်တူကြောင်းပစ္စုပ္ပန်အပြုအမူဖမ်းဆီးမှုများ, narcolepsy ၏အမာခံများ (ဂျုံးစ်, 2003; Sakurai, 2007; Sehgal နှင့် Mignot, 2011) ။ ၏အရေးကြီးမျိုးရိုးဗီဇကယ်ဆယ်ရေး hcrt မျိုးဗီဇစကားရပ်လျူ et al (ကြွက်တွေမှာ narcolepsy လက္ခဏာတွေများလျော့ကျ။ , 2011; Blanco-Centurion et al ။ , 2013).
Sakurai အတွက် Intracerebroventricular hcrt peptides သို့မဟုတ် hcrt agonists ၏ (icv) ပြုတ်ရည်နိုးကုန်ကာလ၌တစ်ဦးတိုးနှင့် SWS အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့် REM အိပ်ခြင်းဖြစ်စေသည် [ပြန်လည်သုံးသပ် (2007)] ။ အဆိုပါ LC အတွက် peptide ၏ Stereotactic ဆေးထိုး, LDT, Basal forebrain ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus မကြာခဏ SWS နှင့်နေ REM sleep (Hagan et al အတွက်သိသိသာသာလျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်နိုးနိုးကွားကွားနှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ , 1999) ။ ပိုများသောမကြာသေးမီကသာ hcrt အာရုံခံအတွက်ရွေးချယ်ဂါဘမြို့သား-B ကအဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်သုံးပြီး hcrt အာရုံခံ၏မျိုးဗီဇ dis-တားစီးအလင်းကိုမှောင်မိုက်ကာလကိုနှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းအိပ်ပျော်ခြင်း / နိုးထပြည်နယ်ပြင်းထန်အကွဲကွဲအပြားပြားသွေးဆောင်စုစုပေါင်းအိပ်ပျော်ခြင်း / ပါတီအား Duration သို့မဟုတ်အရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုမူမမှန်ခြင်းမရှိဘဲ cataplexy ၏ (Matsuki et al ။ , 2009) ။ စုပေါင်းဤအချက်အလက်များကို hcrt peptides အိပ်ပျော်ခြင်းအကြားနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ကြပြီး narcolepsy ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပါတီအားပြည်နယ်၏အကွဲကွဲအပြားပြားအားဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြည်နယ်များနိုးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Hcrt peptides ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသည်သင့်လျော်သောနှိုးဆွမှုနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း hcrt receptors နှစ်ခုဖြစ်သော OX1R သို့မဟုတ် OX2R သည် hcrt ၏နိုးကြားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အိပ်ရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်ဇီဝဗေဒအရတာဝန်ရှိသည် နှင့်ကြွက်သားလေသံထိန်းချုပ်မှု။ OX1R mRNA အများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်အထူးသဖြင့်အတွင်း LC, raphe အရေးပါ, LDT စဉ် OX2R mRNA (ထို tuberomammillary နျူကလိယမှာ) တစ်ဦးဖြည့်စွတ်နှောက် cortex အတွက်စကားရပ်၏ပုံစံ, raphe အရေးပါအဖြစ် dorsomedial နှင့် posterior hypothalamus (Trivedi et al ပြသထားတယ်။ , 1998; Marcus et al ။ , 2001; Mieda et al ။ , 2011) ။ ထို့ကွောငျ့နိုးနိုးကွားကွားနှင့် NREM အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထများ၏ထိန်းချုပ်မှု OX2R (Mochizuki et al အပေါ်ပြင်းထန်စွာမူတည်ကြောင်း။ , အဆိုပြုပြီးပါပြီ 2011) OX1R နှင့် OX2R (Mieda et al နှစ်ဦးစလုံးမှတဆင့်ပြ၏အရှုံးထဲကနေ narcolepsy-cataplexy) ရလဒ်များကိုမှထူးခြားသောနေ REM sleep (များ၏ dysregulation နေစဉ်။ , 2011) ။ သို့သော် narcolepsy ၏စည်းမျဉ်းမှာသူတို့ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေ, အထူးသဖြင့် cataplexy နှင့်အိပ်စက်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ heritable narcolepsy နှင့်အတူခွေးအတွက်တရားမဝင်သော mutation ကိုထမ်း OX2R မျိုးဗီဇ (လင်း et al ။ , 1999) နှင့်သက်ဆိုင်ရာ mouse ကိုမော်ဒယ်, အ OX2R KO ကြွက်, ခွေး (ဝီလီ et al ထက်လျော့နည်းပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုပြသ။ , 2003) ။ OX1R arousal ၏စည်းမျဉ်း (Mieda et al မှပါဝင်ပေမယ့်။ , 2011), narcolepsy ၏ရောဂါလက္ခဏာမှ၎င်း၏အလှူငွေထပ်မံစရိုက်လက္ခဏာတွေဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အရေးကြီးတာကအခြား arousal စနစ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှု cataplexy စဉ်အတွင်းအပြင်းအထန်ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြစ်ပါတယ်။ LC အာရုံခံ Gulyani et al (ဥတုငြိမ်း။ , 1999) နှင့် serotoninergic အာရုံခံသိသိသာသာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု (ဝူ, လျော့နည်းကျဆင်း 2004), အ amygdala တည်ရှိသောဆဲလ် (Gulyani et al နေစဉ်။ , 2002) နှင့် TMN (ယောဟန် et al ပစ်ခတ်တစ်ခုတိုးလာအဆင့်ကိုပြသခဲ့သည်။ , 2004) ။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့ OX1R (LC, raphe) နှင့်နှစ်ဦးစလုံး OX2R (TMN, raphe) သင့်လျော်သောကြွက်သားသေံများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများကိုလည်း Kalogiannis et al (narcoleptic ကြွက်တွေမှာ cataplexy ထွက်လာပါတယ်အတွက်ပြောင်းလဲ cholinergic စနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ , 2011, 2010) ။ ထို့ကြောင့်, အရေးပါသော, မဖြေရှင်းနိုင်ရည်မှန်းချက်အယ်လ်က de Lecea et (hcrt အာရုံခံ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဝါယာကြိုးဖော်ထုတ်ရန်အဖြစ် hcrt ဆိပ်ကမ်းကနေ Synaptic လွှတ်ပေးရန်၏ဒိုင်းနမစ်တိကျစွာအဆိုပါမြစ်အောက်ပိုင်းစီမံကိန်း delineate ရန်ဖြစ်ပါသည်။ , 2012) ထိုထိန်းချုပ်မှု arousal, အိပ်ပျော်ခြင်းပြည်နယ်များ, ကြွက်သားသေံနှင့်ရည်မှန်းချက်-oriented အပြုအမူတွေ။
အဆိုပါ locus coeruleus, norepinephrine နှင့် arousal
အဆိုပါ LC အဆိုပါ4ကပ်လျက်ပင်ဖြစ်သည်th အဆိုပါ brainstem အတွက် ventricle နှင့် monoamine norepinephrine (NE) synthetize ကြောင်းအာရုံခံပါရှိသည်။ အခြားဆဲလ်လူ ဦး ရေ (၄) ခုသည် NE (A1, A2, A5 နှင့် A7 ဆဲလ်အုပ်စုများ) ကိုလည်းထုတ်လုပ်သော်လည်း LC သည် ဦး နှောက်၏စုစုပေါင်း NE ၏ ၅၀% ကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီး cortex ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အလုပ်လုပ်သော NE receptors များစွာရှိပြီးα50နှင့်β receptors များသောအားဖြင့် excitatory postsynaptic potentials နှင့်α1 receptors များသောအားဖြင့် inhibitory postsynaptic အလားအလာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ α2 receptors များကို LC အာရုံခံများ (Berridge and Waterhouse) တွင်သိပ်သည်းစွာတွေ့ရှိရသည်။ 2003) သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အခ်ါလှုပ်ရှားမှုနှိမ်နင်းရန် inhibitory autoreceptors အဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။
နိုးပြုမူနေတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသံသွင်း, SWS အိပ်နေစဉ်မီးလျော့နည်း, LC အာရုံခံနိုးပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း 1-3 Hz မှာလုပ်သူများပစ်ခတ်ကြောင်းပြခြင်းနှင့်နေ REM sleep (Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Bloom စဉ်အတွင်းနီးပါးတိတ်ဆိတ်နေကြသည် 1981; ဂျုံးစ်, 2003; Saper et al ။ , 2010) ။ အဆိုပါ LC လည်းနိုးထကြာချိန်ကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါအဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း 8-10 Hz ၏တိုတောင်းပြီးတော့ Activision နေတာအတွက် phasically မီး။ hcrt အာရုံခံလိုပဲ, ဥတုမှုနှုန်းမြားတှငျပွောငျးလဲ, အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကို (Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Bloom အရင်အဦးနေရာ 1981) ဤဆဲလ်နိုးနိုးကွားကွားသို့မဟုတ်အာရုံစိုက်မှုမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။
စိတ်ဝင်စားစရာက, LC ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတွေ့ရှိရပါသည် cortical EEG သို့မဟုတ် arousal ၏အမူအကျင့်ညွှန်းကိန်းများတွင်တသမတ်တည်းအပြောင်းအလဲများကို (Lidbrink, ထုတ်ယူကြဘူး 1974; Blanco-Centurion et al ။ , 2007) ။ dopamine beta ကို-hydroxylase ၏မျိုးဗီဇ ablation, NE ပေါင်းစပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောအနေနဲ့အင်ဇိုင်းလည်း Hunsley et al (အိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားပြည်နယ်များနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ , 2006) ။ ဤသည်အသီးသီး cortical လှုပ်ရှားမှုနဲ့အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးယန္တရားများထောက်ပံ့ခြင်း, LC ဖွဲ့စည်းပုံမှာမှပြင်ပ, မလိုအပ်တဲ့အာရုံကြော circuitry ၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်α1နှင့်β noradrenergic receptors (Berridge နှင့် Espana ၏ pharmacological ရန်၏အလယ်ပိုင်းထိုး 2000) သို့မဟုတ် inhibitory α2 autoreceptors (De Sarro et al ၏ agonists ။ , 1987) သိသိသာသာသက်သာစေသောဆေးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ တိုက်ရိုက် ventricles သို့မဟုတ် forebrain သို့ NE ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှုနိုးနိုးကွားကွား (Segal နဲ့ကထပ်လောင်းအားပေးအားမြှောက်, 1970; တုန်ခါမှုတွေနှင့် Geyer, 1982) ။ တစ်ဦး cholinergic agonist ၏ဒေသခံ microinjections သုံးပြီး LC အတွက်အာရုံခံ၏ stimulation (bethanechol) halothane-anesthetized ကြွက် (Berridge နှင့်ခြေလျင်အတွက် forebrain EEG ၏လျင်မြန်သော activation ထုတ်လုပ် 1991) ။ မကြာသေးမီကသည် LC-NE စနစ်ကအိပ်ပျော်ခြင်းပြည်နယ်များ (Constantinople နှင့်ဘရူနို, နှိုင်းယှဉ်နိုးအတွက် cortical အာရုံခံ၏တိုးမြှင့အမြှေးပါးအလားအလာထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အရေးပါဖြစ်ပြခဲ့ပါတယ် 2011) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှု LC-NE system ကို cortical လှုပ်ရှားမှု desynchronizes နှင့် arousal တိုးမြှင့်ဖို့ cortical အမြှေးပါးအလားအလာတိုးပွါးကြောင်းဆိုလို။
arousal ၏ hcrt နှင့် LC-NE ထိန်းချုပ်မှု Optogenetic ခှဲစိတျ
hcrt နှင့် LC-NE အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်သို့သော်သူကရွေးချယ်တဲ့ယာယီအိပ်သက်ဆိုင်ရာ resolution ကိုသို့မဟုတ်နိုးနိုးကွားကွားဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူသီးခြား hcrt နှင့် LC-NE လူဦးရေလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်တားစီးရန်ခက်ခဲခဲ့များနှင့်အောင်မြင်ရန် ပတျဝနျးကငျြဆဲလ်သို့မဟုတ်အမျှင်-of ကျမ်းပိုဒ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားဆဲလ်စုံစမ်း Spatial ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပိုကောင်းနိုးနိုးကွားကွား၏အာရုံကြောဆားကစ်၏ယာယီဒိုင်းနမစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အားထုတ်မှုအဖြစ်ကျနော်တို့မကြာသေးမီက Adamantidis et al (optogenetics reversibly နှင့်ရွေးချယ်လွတ်လပ်စွာ-ရွေ့လျားတိရိစ္ဆာန်များအတွက် hcrt နှင့် LC အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကို manipulate ဖို့လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ , 2007; Carter က et al ။ , 2009, 2010, 2012) ။ Optogenetics ရွေးချယ်တိကျတဲ့လှိုင်းအလျား (Boyden et al မှာအလင်းတောက်အတူအသီးသီးဗီဇ-ပစ်မှတ်ထားဆဲလ်တွေကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ရန် actuator opsin မော်လီကျူးများ (ဥပမာ, channelrhodopsin-2 (ChR2) သို့မဟုတ် halorhodopsin-NpHR) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ , 2005) ။ optogenetic နည်းပညာအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များစွာသောအခြားအစွမ်းထက်တဲ့သုံးသပ်ချက်များ (Zhang က et al တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ , 2006; Miesenbock, 2009; Scanziani နှင့်Häusser, 2009; Yizhar et al ။ , 2011; Deisseroth, 2012).
hcrt သို့မဟုတ် LC အာရုံခံဤ actuators ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, ငါတို့ဆဲလ်-type အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်မြောက်ရေး (Adamantidis et al ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာအသီးသီး lentiviral နှင့် cre-မှီခို adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ်စ် (AAV) မျိုးဗီဇပေးပို့ရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ , 2007) ။ အဆိုပါ hcrt သို့မဟုတ် LC လယ်အလင်းကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, ငါတို့တခြားနေရာဖော်ပြထားသကဲ့သို့ optical အမျှင်နာတာရှည် Adamantidis et al (mouse ကိုဦးခေါင်းခွံပေါ်ကိုထညျ့သှငျးခဲ့ကြရသော။ , optical-အာရုံကြော interfaces ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ 2005, 2007; Aravanis et al ။ , 2007; Zhang က et al ။ , 2010) ။ ဤနည်းဗျူဟာကိုသုံးပြီးကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံး hcrt အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ် စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် မီလီစက္ကန့-တိကျသောဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်းဆွနှင့်အတူ (Adamantidis et al ။ , 2007) ။ ဆွ၏မြင့်ယာယီနှင့် Spatial တိကျစွာကျွန်တော်တို့ကို hypocretin အာရုံခံဆဲလျဥတုနှုန်းထားများ (1-30 Hz) (ဟက်စ et al ၏ဇီဝကမ္မအကွာအဝေးတူတဲ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ , 2009) ။ အမှန်မှာကျနော်တို့ hcrt အာရုံခံ၏အမှန်တကယ်အကြိမ်ရေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ် parameters တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်သောငါတို့ optogenetic ဆွဘို့အလငျးကိုသွေးခုန်နှုန်းရထားကိုအသုံးပြု Vivo အတွက် (ဒီအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ LC-NE အာရုံခံ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လည်းမှန်သည်) ။ ကျနော်တို့ hcrt အာရုံခံတိုက်ရိုက်တစ်ဖက်သတ် optical ဆွ SWS သို့မဟုတ် REM sleep ကို (ပုံဖြစ်စေခြင်းမှနိုးနိုးကွားကွားမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးလာကြောင်းတွေ့ရှိရ (Figure1A) .1A) ။5Hz ရထားအဆိုပါဆိပ်ကမ်းကနေ hcrt သို့မဟုတ် dynorphin အပါအဝင်တစ်ဦးအကြိမ်ရေ-မှီခို Synaptic neurotransmitter ၏ဖြန့်ချိ (အချိုမှု) နှင့် neuromodulators, အကြံပြု, မသော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း optical ဆွ (30-1 Hz အလင်းသွေးခုန်နှုန်းရထား) နိုးထစေရန်အောင်းနေချိန်လျှော့ချ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် hcrt peptides optogenetically-သွေးဆောင်အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ဖျန်ဖြေကြောင်းအကြံပြု, hcrt အာရုံခံလှုံ့ဆော်၏သက်ရောက်မှုတစ် OX1R ရန်၏ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ် hcrt ဗီဇ၏မျိုးဗီဇကိုပယ်ဖျက်ပိတ်ဆို့နိုင်ပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် hcrt-ဖော်ပြအာရုံခံထံမှ hcrt လွှတ်ပေးရန်, ဤအာရုံခံ၏ပါတီအား-မြှင့်တင်ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသပါ။ အရေးကြီးတာကအဲဒီရလဒ်တွေကိုယခင်ဆက်စပ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း hcrt အာရုံခံဆဲလျ activation နှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုသရုပ်ပြပါ။ ဒါဟာနောက်ထပ် hcrt အာရုံခံ၏ optical တိတ်ဆိတ် SWS (Tsunematsu et al မြှင့်တင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကထောက်ခံခဲ့သည်။ , 2011).
ဦးနှောက်၏ arousal ဆားကစ်၏ Optogenetic ခှဲစိတျ။ (က) ChR2 နှင့်အတူ hcrt အာရုံခံ၏ stimulation 10 Hz မှာအိပ်စက်ခြင်း-to-ပါတီအားအောင်းနေချိန်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပေမယ် Hz (Adamantidis et al ကနေဒေတာတွေကို 1 မဟုတ်။ , 2007). (ခ) ChR2 နှင့်အတူ LC အာရုံခံ၏ stimulation ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေသည် ...
ဤရလဒ်သည်မကြာသေးမီက Sasaki နှင့်ပူးပေါင်းကအတည်ပြု (Sasaki et al ခံခဲ့ရသည်။ , 2011), hcrt အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကိုသက်ဝင်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ရန်) သီးသန့်ဒီဇိုင်နာမူးယစ်ဆေးဝါး (DREADDs အားဖြင့် activated ဒီဇိုင်နာ receptor လို့ခေါ်တဲ့ pharmacogenetic ချဉ်းကပ်နည်းကိုအသုံးပြုတဲ့သူ။ DREADD နည်းပညာနာရီပေါင်းများစွာ (ဒေါင် et al ၏ယာယီ resolution နဲ့အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု bimodal မော်ဂျူခွင့်ပြုပါတယ်။ , 2010) ။ သူတို့ဟာ hcrt လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်မှု SWS ရာထူးတိုးစဉ် hcrt အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု activation နိုးနိုးကွားကွားတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်စက္ကန့်လေ့လာမှု (Carter က et al အတွက်။ , 2009), ကျနော်တို့ hcrt-mediated အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုအိပ်ရေးပျက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုးမြှင့်အိပ်စက်ခြင်းဖိအား () တို့ကပိတ်ဆို့ထားပါသည်ကတည်းကအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ hcrt ထိန်းချုပ်မှုအိပ်ပျော်ခြင်း homeostasis ဖြစ်စဉ်များ၏မှီခိုအောက်မှာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် hcrt ၏ optogenetic စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်သည့် histaminergic စနစ် hcrt ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းကိုအခြားပစ်မှတ်အကြံပြုခြင်း histamine decarboxylase နောက်ကောက်ကြွက် (histamine synthesize နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြွက်) တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သော LC အာရုံခံအဖြစ်မြစ်အောက်ပိုင်း arousal စင်တာများ hcrt optogenetic ဆွတုန့်ပြန် (ဂ-Fos စကားရပ်ဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုးလာနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပြသခဲ့သည်။ ယခင်အလုပ် LC NE အာရုံခံ (Bourgin et al အပေါ် hcrt တစ်ခု excitatory သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည်လို့ပဲ။ , 2000), ကျနော်တို့က hcrt-LC connection ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် optogenetic ကိုင်တွယ်အသစ်တစ်ခုပစ်မှတ်အဖြစ် noradrenergic LC ပေါ်မှာငါတို့စမ်းသပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအာရုံစူးစိုက်။
တတိယလေ့လာမှု (Carter က et al အတွက်။ , 2010), ကျနော်တို့ဗီဇခေါက်-in ကိုရွေးချယ် tyrosine hydroxylase အတွက် (TH) အာရုံခံ (Atasoy et al Cre ဖော်ပြကြွက်သို့ Cre recombinase-မှီခို adeno-ဆက်စပ်ဗိုင်းရပ် (rAAV) ၏ stereotaxic ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် LC-NE အာရုံခံပစ်မှတ်ထား။ , 2008; Tsai et al ။ , 2009) ။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအသီးသီး, LC-NE အာရုံခံ NpHR နှင့် ChR2 နှစ်ဦးစလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်နှင့်တားစီးနှင့်ကိုသက်ဝင်နိုင် စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် (ပုံ (Figure1B) .1B) ။ ကျနော်တို့ SWS နှင့် REM sleep ကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုချက်ချင်း (1 ့ထက်နည်း) ဖြစ်ပေါ်စေ LC-NE အာရုံခံ၏ optogenetic အနိမ့်ကြိမ်နှုန်း (10-5 Hz) ဆွတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုးနိုးကွားကွားစဉ်အတွင်း LC အာရုံခံ၏ stimulation locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးလာနှင့်စုစုပေါင်းအချိန်ခိုင်ခံ့သော arousal အကျိုးသက်ရောက်မှုအတည်ပြု, နိုးနေခဲ့ရသည်။ ဆနျ့ကငျြ, LC-NE အာရုံခံ၏ NpHR-mediated တိတ်ဆိတ်ပါတီအားဖြစ်စဉ်များများ၏ကြာချိန်လျော့နည်းသွားပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်များအိပ်ပျော်သောအခါအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုပိတ်ဆို့ခဲ့ပါဘူး။ အတူတူယူ, ဒီလေ့လာမှု (NpHR စမ်းသပ်မှု) LC-NE အာရုံခံ၏ activation နိုးနိုးကွားကွား၏ပုံမှန် Duration ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြပြီး, ချက်ချင်းအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်, နိုးနိုးကွားကွားကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နှင့် locomotor arousal တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် LC-NE အာရုံခံအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အထွေထွေ arousal မြှင့်တင်ရန်အစာရှောင် tuning system အဖြစ်ပြုမူကြောင်းအဆိုပြုထား။ စိတ်ဝင်စားစရာကျနော်တို့ LC-NE အာရုံခံ၏စဉ်ဆက်မပြတ် optical activation locomotor ဖမ်းဆီး (Carter က et al induces ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , 2010) ။ ထိုသို့သောအပြုအမူဖမ်းဆီးမှုများ cataplexy, catatonia သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များနှင့်လူ့လူနာ (Scammell et al အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအေးခဲနေသောအမူအကျင့်နှင့်အတူဘုံလက္ခဏာတွေ share ။ , 2009) ။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားယန္တရားများ LC-NE synapses ဆိပ်ကမ်းသို့မဟုတ်သွက်ချာပါဒမှဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ brainstem မော်တာအရေးပါ၏ LC-NE overexcitation ထံမှ NE လျော့ကျပါဝင်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုအခြေခံယန္တရားပျက်ပြယ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်တလောလေ့လာမှု (Carter က et al အတွက်။ , 2012), ကျနော်တို့ LC လှုပ်ရှားမှုအိပ်စက်ခြင်း -to- နိုးအသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ် hcrt neuron ရဲ့သက်ရောက်မှုသောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ hcrt နှင့် LC အာရုံကြောလူ ဦး ရေသည်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်ဒေသများတွင်တည်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးတည်းတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအဆောက်အအုံများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SWS အိပ်ပျော်စဉ်တွင် noradrenergic LC အာရုံခံများကိုဟန့်တားနှိမ်နင်းနေစဉ် hcrt အာရုံခံများကိုလှုံ့ဆော်ရန် optogenetic နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ hcrt ဆွနေစဉ်အတွင်း LC neuron တိတ်ဆိတ် hcrt-mediated အိပ်စက်ခြင်း -to- နိုးအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုပိတ်ဆို့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ (Figure1C) .1C) ။ ဆနျ့ကငျြကျနော်တို့ခြေလှမ်း-function ကို opsin ကတဆင့် LC အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးပွားလာ (SFO) activation-ထားတဲ့ပစ်မှတ်ဆဲလ် (Berndt et al ၏တိုးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , 2009သူ့ဟာသူအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်မထားဘူးတဲ့ LC ဆွ protocol ကိုသုံးပြီး) -during hcrt ဆွ () တိုးမြှင့် hcrt-mediated အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှု (ပုံ (Figure1D) .1D) ။ အတူတူယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်များ LC ကတော့မလှုပ်မရှားကာလအတွင်း hcrt-mediated SWS-to-ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်လိုအပ်သောနှင့်လုံလောက်သောမြစ်အောက်ပိုင်း effector အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖော်ပြသည်။
hcrt နှင့် LC-NE system ကိုဒိုင်းနမစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကျနော်တို့ optogenetic hcrt ၏ခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့် LC-NE အာရုံခံအိပ်ပျော်ခြင်းမှအယ်လ် Adamantidis et (သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောယာယီဒိုင်းနမစ်နှင့်အတူအသွင်ကူးပြောင်းမှုနိုးထိခိုက်စေသည်ဟုလေ့လာသည်။ , 2007; Carter က et al ။ , 2009, 2010, 2012) ။ LC အာရုံခံ၏ဆွ 10 ့ထက်လျော့နည်းအတွက်အိပ်စက်ခြင်း-to-ပါတီအားအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်စဉ် hcrt အာရုံခံ၏ acute optical activation, 30-5 ့နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တဦးတည်းရှင်းပြချက်ဟာ LC-NE system ကို arousal, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အမူလတန်း effector အဖြစ်ပြုမူနေချိန်တွင် hcrt အာရုံခံ hypothalamic-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစဉ်အတွင်း arousal ၏အထက်ရှိပေါင်းစပ်အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အာရုံခံ effector စနစ်များဖွယ်ရှိမလိုအပ်တဲ့နှင့်သွင်းအားစုများကွဲပြားအစုံအားဖြင့် activated ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ, ထိုကဲ့သို့သောဗဟို histaminergic နှင့် cholinergic စနစ်များကဲ့သို့သောအခြား arousal စနစ်များ, ပိတ်ဆို့ခြင်းမှာလည်းပြင်းထန်စွာနဲ့အခြားစမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက် hcrt-သွေးဆောင်အပြုအမူပြည်နယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။
ဤအရေတိုရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်က hcrt အာရုံခံ၏ ~ 1-4 ဇ၏ (ဆိုလိုသည်မှာ, Semi-နာတာရှည်) photostimulation စမ်းသပ်ချက်ရေရှည်သော်လည်း, နိုးနိုးကွားကွား၏စုစုပေါင်းကြာချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့မရှိဘဲအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုတိုးလာကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြောင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် LC-NE အာရုံခံ၏ photostimulation သိသိသာသာနိုးနိုးကွားကွားကြာချိန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည် LC-NE အာရုံခံမဟုတ်ဘဲ cortical အမြှေးပါးအလားအလာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် cortical EEG desynchronizing နေဖြင့်ပါတီအားကြာချိန်ကိုထိန်းချုပ်စေခြင်းငှါနေစဉ် hcrt စနစ်ကအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားနယ်နိမိတ်ထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
hcrt အာရုံခံ၏ hypothalamic မူပြောင်းခြင်းသည်ဤဆဲလ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အစားအစာ forage, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပါအဝင် homeostatic ဖြစ်စဉ်များအတွင်းထင်ရှားတဲ့ arousal အခန်းကဏ္ဍ, ရှိသည်ဆိုလို။ နိုးနိုးကွားကွားသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအပြင် arousal စနစ်များလည်းစသည်တို့ကိုဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, လေယာဉ်-သို့မဟုတ်ရန်ပွဲတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဒီ redundancy များအတွက်လိုအပ်သောနိုးနိုးကွားကွားနှင့် arousal-related အပြုအမူတွေကိုထောက်ပံ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပိုမိုစုံလင်ဦးနှောက်ယန္တရားများကိုဖြတ်ပြီး arousal function ကိုစုစည်းခဲ့ကြပေမည် ရှင်သန်မှု။ ဥပမာ, LC-NE စနစ်၏ activation arousal နှင့်အကြောင်းမရှိစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ (Itoi နှင့် Sugimoto, တိုးပွါး 2010) ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, neuropeptide S ကို (NPS) စနစ်, LC မှ ventral တစ်ကန့်သတ်အာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်ထုတ်လုပ်တစ်ဦး peptide လည်း arousal တိုးပွါးပေမယ့် လျှောက်လျော့နည်း စိုးရိမ်ပူပန် (Pape et al ။ , 2010) ။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးရန်, arousal ဆားကစ်ဖြစ်နိုင်သည်ကသူတို့ afferent နှင့် efferent ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုရွေးချယ် compartmentalization မှတဆင့်အခြားသူများနှင့်အတူက transmitter / modulator တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စွမ်းရည်နှင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုဆားကစ် arousal, သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီကြရပေမည်။
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်က optogenetics၊ မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာမောက်စ်မော်ဒယ်များနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကို EEG / EMG ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ထူးခြား။ အစွမ်းထက်သောကိရိယာများကိုလှုံဆော်ရန် hcrt နှင့် LC စနစ်များကိုပိုမိုနားလည်စေရန်ကူညီခဲ့သည်။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နိုးနိုးကြားကြားရှိခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသည့်အခြားအာရုံခံဆဲလ်များ။ ဦး နှောက်တွင်းရှိအခြားအာရုံခံဆဲလ်များကို optogenetic စုံစမ်းမှုများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်း / နိုးခြင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိသူတို့၏တစ် ဦး ချင်းနှင့်စုပေါင်းအခန်းကဏ္ determine များကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဤကိရိယာများသည်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာပရိုဂျက်များ၊ အာရုံကြောဆဲလ်များပို့လွှတ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုထုတ်လွှတ်မှု၏ဒိုင်းနမစ်အပေါ် အခြေခံ၍ နိုးကြားမှုအခြေအနေများကိုအခြေခံသည့် ဦး နှောက်ယန္တရားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ မြင့်မားသောယာယီတိကျမှု (<1 s) များဖြင့်ဤ circuit များအား ပစ်မှတ်ထား၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည်အစားအစာစားခြင်း၊ စွဲခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းစသည့်အပြုအမူအမျိုးမျိုးတွင်သူတို့၏အခန်းကဏ္investigကိုစုံစမ်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤလေ့လာမှုများသည်နာတာရှည်စိုးရိမ်စိတ်၊ စွဲစွဲလမ်းမှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစသောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါယန္တရားများကိုပျက်ပြားစေနိုင်သည်။
မဿဲအီး Carter ကအဆိုပါ Hilda နဲ့ Preston Davis ကဖောင်ဒေးရှင်းကနေမိဿဟာယအားဖြင့်ထောက်ခံသည်။ လူးဝစ်က de Lecea Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်ကို၎င်း, Klarman မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကသုတေသနကာကွယ်ရေးအဆင့်မြင့်သုတေသနပရောဂျက်များအေဂျင်စီအမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံသည်။ Antoine Adamantidis ဟာဒေါက်ဂလပ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ, ကျန်းမာရေးသုတေသနများအတွက်ကနေဒါ Institute မှ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေအတွက်ကနေဒါရန်ပုံငွေအဖွဲ့, ကနေဒါသုတေသနသဘာပတိနှင့် NSERC ကထောက်ခံသည်။
et al Adamantidis အေ, သောမတ်စ်အီး, Foidart အေ, Tyhon အေ, Coumans ခ, Minet အေ။ (2005) ။ ကြွက်များတွင် melanin-အာရုံဟော်မုန်းအဲဒီ receptor 1 ကမောက်ကမဖြစ်စေရန် NMDA အဲဒီ receptor function ကို၏သိမြင်မှုလိုငွေပြမှုနှင့်ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 2837-2844 10.1111 / j.1460-9568.2005.04100.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Adamantidis AR, Zhang ကအက်ဖ်, Aravanis လေး, Deisseroth ကေ, က de Lecea L. (2007) ။ နိုးထ၏အာရုံကြောအလွှာ hypocretin အာရုံခံ၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပျေါ။ သဘာဝတရား 450, 420-424 10.1038 / nature06310 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aravanis လေး, ဝမ် L.-P. , Zhang ကအက်ဖ်, Meltzer LA က, Mogri MZ စ, Schneider ကို MB, et al ။ (2007) ။ တစ်ဦး optical အာရုံကြော interface ကို: Vivo အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံ fiberoptic နှင့် optogenetic နည်းပညာနှင့်အတူကြွက်မော်တာ cortex ထိန်းချုပ်။ ဂျေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Eng ။ 4, S143-S156 10.1088 / 1741-2560 /4/3/ S02 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aston-Jones ဟာဂျီ, Bloom FE (1981) ။ ကြွက်ပြုမူအတွက် norepinephrine ပါဝင်သော locus coeruleus အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဟာအိပ်စက်ခြင်း-နှိုးသံသရာအတွက်အတက်အကျမျှော်လင့်ထားသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 1, 876-886 [PubMed]
Atasoy ဃ, Aponte Y. , စုနာရီ, Sternson သည် SM (2008) ။ တစ်ဦးက Flex switch သည်ပုံရိပ်နှင့်တာဝေးပစ် circuit ကိုမြေပုံအဘို့အမျိုးစုံဆဲလ်အမျိုးအစားများမှ channelrhodopsin-2 ပစ်မှတ်ထား။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 7025-7030 10.1523 / JNEUROSCI.1954-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berndt အေ, Yizhar O. , Gunaydin LA က, Hegemann P. , Deisseroth K. (2009) ။ bi-တည်ငြိမ်အာရုံကြောပြည်နယ် switches များ။ နတ်။ neuroscience ။ 12, 229-234 10.1038 / nn.2247 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge CW, Espana RA (2000) ။ များ၏ညှိနှိုင်းသက်သာစေသောဆေး noradrenergic alpha (1) ၏သက်ရောက်မှု - နှင့် forebrain electroencephalograph နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းအပေါ် beta ကို-receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ neuroscience 99, 495-505 10.1016 / S0306-4522 (00) 00215-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge CW, ခြေလျင် SL (1991) ။ neocortex နှင့် hippocampus အတွက် electroencephalograph လှုပ်ရှားမှုအပေါ် locus coeruleus activation ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ neuroscience ။ 11, 3135-3145 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berridge CW, Waterhouse bd (2003) ။ အဆိုပါ locus coeruleus-noradrenergic system ကို: အမူအကျင့်ပြည်နယ်၏မော်ဂျူနှင့်ပြည်နယ်မှီခိုသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 42, 33-84 10.1016 / S0165-0173 (03) 00143-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blanco-Centurion C. , Gerashchenko ဃ, Shiromani PJ (2007) ။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပါတီအား၏နေ့စဉ်အဆင့်ဆင့်အပေါ်သုံး arousal လူဦးရေ၏ saporin-သွေးဆောင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 14041-14048 10.1523 / JNEUROSCI.3217-07.2007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blanco-Centurion C. , လျူအမ်, Konadhode R. , Pelluru ဃ, Shiromani PJ (2013) ။ orexin နောက်ကောက်ကြွက်များတွင် dorsolateral pons အတွက် orexin ဗီဇလွှဲပြောင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ အိပ်စက်ခြင်း 36, 31-40 10.5665 / sleep.2296 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Bourgin P. , Huitrón-Résendizအက်စ်, Spier အေဒီ, Fabre V. , Morte ခ, Criado JR ။ (2000) ။ Hypocretin-1 locus coeruleus အာရုံခံ၏ activation မှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှုအိပ်ပျော်ခြင်း modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 7760-7765 [PubMed]
Boyden ES, Zhang ကအက်ဖ်, Bamberg အီး, Nagel G. အ, Deisseroth K. (2005) ။ မီလီစက္ကန့-timescale, အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု၏မျိုးရိုးဗီဇလျာထားသော optical ထိန်းချုပ်မှု။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 1263-1268 10.1038 / nn1525 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က ME, Adamantidis အေ, Ohtsu အိပ်ချ်, Deisseroth ကေ, က de Lecea L. (2009) ။ အိပ်စက်ခြင်း homeostasis hypocretin-mediated အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှု modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 10939-10949 10.1523 / JNEUROSCI.1205-09.2009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က ME, Brill ဂျေ, Bonnavion P. , Huguenard JR, Huerta R. , က de Lecea L. (2012) ။ Hypocretin-mediated အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထအသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်ယန္တရား။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 109, E2635-E2644 10.1073 / pnas.1202526109 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က ME, Yizhar O. , Chikahisa အက်စ်, ငုယင်အိပ်ချ်, Adamantidis အေ, Nishino အက်စ်, et al ။ (2010) ။ locus coeruleus အာရုံခံ၏ optogenetic မော်ဂျူနှင့်အတူ arousal စာ။ နတ်။ ထုတ်ဝေရေး Group မှ 13, 1526-1533 10.1038 / nn.2682 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Constantinople CM, ဘရူနို RM (2011) ။ ဒေသခံ cortical ကွန်ရက်များပေါ်တွင်နိုးနိုးကွားကွား၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 69, 1061-1068 10.1016 / j.neuron.2011.02.040 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Deisseroth K. (2012) ။ Optogenetics နှင့် Psychiatry: applications များ, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို။ BPS 71, 1030-1032 10.1016 / j.biopsych.2011.12.021 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
က de Lecea L. , Carter က ME, Adamantidis အေ (2012) ။ နိုးနိုးကွားကွားနှင့် arousal အပေါ်အလင်းထွန်းလင်း။ BPS 71, 1046-1052 10.1016 / j.biopsych.2012.01.032 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Lecea L. , Kilduff TS, Peyron C. , Gao X တို့မှာ, Foye PE, Danielson PE, က de ။ (1998) ။ အဆိုပါ hypocretins: neuroexcitatory လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ hypothalamus-တိကျတဲ့ peptides ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 95, 322-327 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
က de Lecea L. , Sutcliffe JG (2005) ။ Hypocretins ။ နယူးယောက်, NY: Springer Verlag
de Sarro GB ကို, Ascioti C. , Froio အက်ဖ်, Libri V. , Nisticò G. အ (1987) ။ locus coeruleus clonidine နှင့် alpha 1- နှင့် alpha 2-adrenoceptors မှာသရုပ်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအိပ်စက်ခြင်းနှင့် arousal ယန္တရားများကိုထိခိုက်ဘယ်မှာဆိုက်ကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထား။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 90, 675-685 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dong အက်စ်, Rogan SC, Roth BL (2010) ။ DREADDs ၏ညွှန်ကြားသည်မော်လီကျူးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: လာမယ့်မျိုးဆက် RASSLs ဖန်တီးနေတဲ့ယေဘုယျချဉ်းကပ်။ နတ်။ Protoc ။ 5, 561-573 10.1038 / nprot.2009.239 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တုန်ခါမှုတွေ C. , Geyer MA (1982) ။ norepinephrine ၏ intracerebral တာဟာစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ရွေ့လျားများအတွက်အရေးယူမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်ဆိုက်အဖြစ် hippocampus ။ ပြုမူနေ။ အာရုံကြော Biol ။ 34, 421-426 [PubMed]
ဝိန်း Fort P. , Bassetti CL, Luppi P.-H. (2009) ။ သတိဝီရိယပြောင်းမှာဒီလိုဖော်ပြထား: အာရုံခံကွန်ရက်များနှင့်ယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. အသိအမြင်အသစ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 1741-1753 10.1111 / j.1460-9568.2009.06722.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gulyani အက်စ်, Wu MF, Nienhuis R. ဂျွန်ဂျေ, Siegel JM (2002) ။ အဆိုပါ narcoleptic ခွေး၏ amygdala အတွက် Cataplexy-related အာရုံခံ။ neuroscience 112, 355-365 10.1016 / S0306-4522 (02) 00089-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gulyani လုပ် SA, Yau အီး, Mignot အီး, ဖန်ခ, Siegel JM (1999) ။ Locus coeruleus အာရုံခံ: cataplexy ကာလအတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏ချုပ်ရာ။ neuroscience 91, 1389-1399 10.1016 / S0306-4522 (98) 00600-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hagan JJ, Leslie RA, Patel ကအက်စ်, အီဗန် ML, Wattam က TA, ကေတီဟုမ်းအက်စ်, et al ။ (1999) ။ Orexin တစ်ဦးက locus coeruleus ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် arousal တိုးပွားစေပါသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 96, 10911-10916 10.1073 / pnas.96.19.10911 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဟက်စ OK ကို, Lee က MG, ဂျုံးစ် (2009) BE ။ Melanin-အာရုံဟော်မုန်းအာရုံခံဟာအိပ်စက်ခြင်း-ပါတီအားသံသရာတစ်လျှောက် orexin အာရုံခံတစ်ဦးအပြန်အလှန်ထုံးစံ၌ထမ်းရွက်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 106, 2418-2422 10.1073 / pnas.0811400106 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hunsley က MS, Curtis WR, Palmiter RD (2006) ။ အမူအကျင့်များနှင့် norepinephrine နှင့် hypocretin ချို့တဲ့ကြွက်၏အိပ်စက်ခြင်း / ပါတီအားဝိသေသလက္ခဏာများ။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 5, 451-457 10.1111 / j.1601-183X.2005.00179.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Itoi K. , Sugimoto N. (2010) ။ စိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက် brainstem noradrenergic စနစ်များကို။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 22, 355-361 10.1111 / j.1365-2826.2010.01988.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ယောဟန်သည်ဂျေ, Wu M.-F. , Boehmer ln, Siegel JM (2004) ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် Cataplexy-တက်ကြွအာရုံခံ။ အာရုံခံဆဲလျ 42, 619-634 10.1016 / S0896-6273 (04) 00247-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျုံးစ် (2003) BE ။ arousal စနစ်များကို။ တပ်ဦး။ Biosci ။ 8, s438-s451 [PubMed]
Kalogiannis အမ်, Grupke SL, Potter PE, Edwards က JG, Chemelli RM, Kisanuki YY, et al ။ (2010) ။ Narcoleptic orexin အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက် laterodorsal tegmental အာရုံခံအတွက်တိုးမြှင့် cholinergic ဂုဏ်သတ္တိများဖော်ပြ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 32, 130-142 10.1111 / j.1460-9568.2010.07259.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kalogiannis အမ်, Hsu အီး, ဝီလီ JT, Chemelli RM, Kisanuki YY, Yanagisawa အမ်, et al ။ (2011) ။ နှစ်ဆ orexin အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ narcoleptic တိုက်ခိုက်မှုများ Cholinergic မော်ဂျူ။ PLoS ONE 6: e18697 10.1371 / journal.pone.0018697 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee က MG, ဟက်စ OK ကို, ဂျုံးစ် BE (2005) ။ အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း-နှိုးသံသရာတစ်လျှောက်ဖော်ထုတ် orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ discharge ။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 6716-6720 10.1523 / JNEUROSCI.1887-05.2005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lidbrink P. (1974) ။ အိပ်စက်ခြင်းအပေါ် noradrenaline လမ်းကြောင်းကွှနှင့်ကြွက်များတွင်နှိုး၏တွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 74, 19-40 10.1016 / 0006-8993 (74) 90109-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lin ကအယ်လ်, Faraco ဂျေ, et al လီ R. , Kadotani အိပ်ချ်, ရော်ဂျာဒဗလျူ, Lin က X တို့မှာ။ (1999) ။ အဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းရောဂါခွေးတစ်ကောင် narcolepsy အဆိုပါ hypocretin (orexin) အဲဒီ receptor2ဗီဇတစ်ခု mutation ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ cell 98, 365-376 10.1016 / S0092-8674 (00) 81965-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူအမ်, et al Blanco-Centurion C. , Konadhode R. , Begum အက်စ်, Pelluru ဃ, Gerashchenko ဃ။ (2011) ။ zona incerta အာရုံခံသို့ Orexin ဗီဇလွှဲပြောင်း narcoleptic ကြွက်တွေမှာကြွက်သားသွက်ချာပါဒဖိနှိပ်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 6028-6040 10.1523 / JNEUROSCI.6069-10.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marcus ဖြစ်မှု, Aschkenasi CJ, Lee ကအီး, Chemelli RM, Saper သမဝါယမ, Yanagisawa အမ်, et al ။ (2001) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin receptors 1 နှင့်2၏ differential စကားရပ်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 435, 6-25 [PubMed]
Matsuki တီ, Nomiyama အမ်, Takahira အိပ်ချ်, Hirashima N. , Kunita အက်စ်, Takahashi အက်စ်, et al ။ (2009) ။ ဂါဘမြို့သားများရွေးချယ်ဆုံးရှုံးမှု (ခ) နှောင့်အယှက်အိပ်ပျော်ခြင်း / နိုးနိုးကွားကွားဗိသုကာအတွက် orexin ထုတ်လုပ်အာရုံခံရလဒ်များကိုအတွက် receptors ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 106, 4459-4464 10.1073 / pnas.0811126106 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mieda အမ်, Hasegawa အီး, Kisanuki YY, Sinton CM, Yanagisawa အမ်, Sakurai တီ (2011) ။ Non-REM နှင့် REM အိပ်စက်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် orexin အဲဒီ receptor-1 နှင့် -2 ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential ။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 6518-6526 10.1523 / JNEUROSCI.6506-10.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Miesenbock G. အ (2009) ။ အဆိုပါ optogenetic အနနေဲ့ဘာသာရေးအမေး။ သိပ္ပံ 326, 395-399 10.1126 / science.1174520 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mileykovskiy BY, Kiyashchenko LI, Siegel JM (2005) ။ ဖော်ထုတ် hypocretin / orexin အာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှု၏အမူအကျင့် Correlate ။ အာရုံခံဆဲလျ 46, 787-798 10.1016 / j.neuron.2005.04.035 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mochizuki တီ, Arrigoni အီး, Marcus ဖြစ်မှု, Clark က EL, Yamamoto အမ်, Honer အမ်, et al ။ (2011) ။ အဆိုပါ posterior hypothalamus အတွက် Orexin အဲဒီ receptor2စကားရပ် narcoleptic ကြွက်တွေမှာအိပ်ကယ်ဆယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 108, 4471-4476 10.1073 / pnas.1012456108 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Modirrousta အမ်, Mainville L. , ဂျုံးစ် BE (2005) ။ Orexin နှင့် MCH အာရုံခံပြန်လည်နာလန်ထူ vs. အိပ်ရေးပျက်ပြီးနောက်ကွဲပြားခြားနားက c-Fos ဖော်ပြခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော adrenergic receptors သည်းခံကြ၏။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 2807-2816 10.1111 / j.1460-9568.2005.04104.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pape H.-C. , တောတွင်း K. , Seidenbecher တီ, စိုးရိမ်. ဂျေ, Reinscheid RK (2010) ။ Neuropeptide S က: ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်ထိန်းညှိဦးနှောက်ထဲမှာ transmitter ကိုစနစ်။ Neuropharmacology 58, 29-34 10.1016 / j.neuropharm.2009.06.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Peyron C. , Faraco ဂျေ, et al ရော်ဂျာဒဗလျူ, Ripley ခ, Overeem အက်စ်, Charnay Y. ။ (2000) ။ အစောပိုင်းစတင်ခြင်း narcolepsy နှင့်လူ့ narcoleptic ဦးနှောက်ထဲမှာ hypocretin peptides တစ် generalized မရှိခြင်း၏အမှု၌တစ်ဦးက mutation ။ နတ်။ Med ။ 6, 991-997 10.1038 / 79690 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakurai တီ (2007) ။ orexin များ၏အာရုံကြောဆားကစ် (hypocretin): အိပ်စက်ခြင်းမနိုးထိန်းသိမ်းခြင်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 8, 171-181 10.1038 / nrn2092 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakurai တီ, Amemiya အေ, Ishii အမ်, Matsuzaki ဗြဲ, Chemelli RM, Tanaka အိပ်ချ်, et al ။ (1998) ။ Orexins နှင့် orexin receptors: hypothalamic neuropeptides နှင့်အပြုအမူအစာကျွေးထိန်းညှိကြောင်း, G ပရိုတိန်း-coupled receptors တစ်မိသားစု။ cell 92, 573-585 10.1016 / S0092-8674 (00) 80949-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Saper သမဝါယမ, Fuller pm တွင်, Pedersen NP, Lu ကဂျေ, Scammell TE (2010) ။ ပြည်နယ် switching အိပ်။ အာရုံခံဆဲလျ 68, 1023-1042 10.1016 / j.neuron.2010.11.032 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sasaki K. , ဆူဇူကီးအမ်, Mieda အမ်, Tsujino N. , Roth ခ, Sakurai တီ (2011) ။ orexin အာရုံခံ၏ Pharmacogenetic မော်ဂျူကြွက်တွေမှာအိပ်စက်ခြင်း / နိုးနိုးကွားကွားပြည်နယ်များပွောငျးလဲ။ PLoS ONE 6: e20360 10.1371 / journal.pone.0020360 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Scammell TE, ဝီလီ JT, Guilleminault C. , Siegel JM, နိုင်ငံတကာအလုပ်အဖွဲ့ Narcolepsy ၏ကြွက် & Models ပေါ်မှာ။ (2009) ။ narcolepsy ၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များအတွက် cataplexy ၏တစ်ဦးကသဘောတူချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ အိပ်စက်ခြင်း 32, 111-116 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Scanziani အမ်, Häusserအမ် (2009) ။ အလင်း၏အသက်အရွယ်အတွက် Electrophysiology ။ သဘာဝတရား 461, 930-939 10.1038 / nature08540 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Segal DS, ကထပ်လောင်း AJ (1970) ။ norepinephrine ၏ intraventricular ပြုတ်ရည်စဉ်အတွင်းကြွက်များ၏အမူအကျင့်ကို Activation ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 66, 289-293 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sehgal အေ, Mignot အီး (2011) ။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းမမှန်များ၏မျိုးရိုးဗီဇ။ cell 146, 194-207 10.1016 / j.cell.2011.07.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Takahashi K. , လင်း J.-S. , Sakai က K. (2008) ။ မောက်အတွက်နိုးထ-အိပ်ပျော်ခြင်းပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း orexin နှင့် Non-orexin နိုး-တက်ကြွအာရုံခံ၏အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ neuroscience 153, 860-870 10.1016 / j.neuroscience.2008.02.058 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thannickal TC, Moore က RY, Nienhuis R. , Ramanathan L. , Gulyani အက်စ်, Aldrich အမ်, et al ။ (2000) ။ လူ့ narcolepsy အတွက် hypocretin အာရုံခံအရေအတွက်လျှော့ချ။ အာရုံခံဆဲလျ 27, 469-474 10.1016 / S0896-6273 (00) 00058-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Trivedi P. , ယုအိပ်ချ်, MacNeil DJ သမား, ဗန် der Ploeg LH, ဂွမ် XM (1998) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ orexin အဲဒီ receptor mRNA ၏ဖြန့်ဝေ။ FEBS လက်တ။ 438, 71-75 [PubMed]
et al Tsai H.-C. , Zhang ကအက်ဖ်, Adamantidis အေ, Stuber GD, Bonci အေ, က de Lecea L. ။ (2009) ။ dopaminergic အာရုံခံအတွက် Phasic ပစ်ခတ်ရန်အမူအကျင့်အေးစက်များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံ 324, 1080-1084 10.1126 / science.1168878 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsunematsu တီ, Kilduff TS, Boyden ES, Takahashi အက်စ်, Tominaga အမ်, Yamanaka အေ (2011) ။ orexin / hypocretin အာရုံခံ၏ acute optogenetic တိတ်ဆိတ်ကြွက်များတွင်နှေးကွေး-လှိုင်းအိပ်ပျော်ခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်။ ဂျေ neuroscience ။ 31, 10529-10539 10.1523 / JNEUROSCI.0784-11.2011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝီလီ JT, Chemelli RM, Sinton CM, Tokita အက်စ်, Williams က SC, Kisanuki YY, et al ။ (2003) ။ Orexin အဲဒီ receptor-2 နှင့် Orexin တရားမဝင်သောကြွက်တွေမှာကွဲပြား narcolepsy syndrome: က Non-REM နှင့် REM sleep ကိုစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်များ၏မော်လီကျူးဗီဇခှဲစိတျ။ အာရုံခံဆဲလျ 38, 715-730 10.1016 / S0896-6273 (03) 00330-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝူ MF (2004) ။ အဆိုပါအိပ်ပျော်ခြင်း-နှိုးသံသရာတစ်လျှောက်နှင့် narcoleptic ခွေးအတွက် cataplexy စဉ်အတွင်း dorsal raphe ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်။ ဂျေ Physiol ။ (Lond ။ ) 554, 202-215 10.1113 / jphysiol.2003.052134 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yizhar O. , Fenno LE, Davidson တီဂျေ, Mogri အမ်, Deisseroth K. (2011) ။ အာရုံကြောစနစ်များအတွက် Optogenetics ။ အာရုံခံဆဲလျ 71, 9-34 10.1016 / j.neuron.2011.06.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yokogawa တီ, Marin ဒဗလျူ, Faraco ဂျေ, Pézeron G. အ, Appelbaum L. , Zhang ကဂျေ, et al ။ (2007) ။ hypocretin အဲဒီ receptor Mutant အတွက် zebrafish နှင့်အိပ်မပျော်အတွက်အိပ်စက်ခြင်း၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ PLoS Biol ။ 5: e277 10.1371 / journal.pbio.0050277 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang ကအက်ဖ်, Gradinaru V. , Adamantidis AR, Durand R. , Airan RD, က de Lecea L. , et al ။ (2010) ။ အာရုံကြောဆားကစ်၏ Optogenetic စစ်ကြောရေး: နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံစကားတွေများအတွက်နည်းပညာ။ နတ်။ Protoc ။ 5, 439-456 10.1038 / nprot.2009.226 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang ကအက်ဖ်, ဝမ် L.-P. , Boyden ES, Deisseroth K. (2006) ။ Channelrhodopsin-2 နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆဲလ် optical ထိန်းချုပ်မှု။ နတ်။ နည်းလမ်းများ 3, 785-792 10.1038 / nmeth936 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]